fihenan-tsofina avo lenta amin'ny alàlan'ny fizarana vy sy varahina
Home / Applications / Induction Brazing / fizarana fizarana vy sy varahina
Sokajy: Applications, Induction Brazing Tags: haingam-pandaminana mahavelona, haavo matetika, induction soldering, induction soldering brass, fizarana famandrihana induction, soldering, varahina varahina, vy fametrahana, vy sy varahina
Industry: Famokarana famokarana fahana
fitaovana: DW-UHF-6KW milina famatsiana fampitaovana famatsiana famoronana tanana
Fitaovana fitsapana 1: Satroka baoty
Fitaovana fitsapana 2: Vatosoa vy
Temperature: 800 oF (426 ° C)
Ireo singa dia ampiasaina amin'ny rafitra mifehy ny haavon'ny rano.
Manaova dingana ho an'ny fitsapana 1:
Voalohany, amidy alohan'ny fametrahana azy dia apetraka eo ambanin'ny molotry ny fitaovana. Avy eo, nampiana ilay takela. Ny famatsiana herinaratra - napetraka tao anatin'ny 3 segondra. Vita ny dingana famaranana.
Manaova dingana ho an'ny fitsapana 2:
Averina indray, ny mpivarotra mialoha-pivoriana dia apetraka manodidina ny tendon'ny fonon-tanana. Ny tariby hakentina dia ampiana amin'ny fitaovana miasa. Ny fe-potoana famatsiana herinaratra dia napetraka 4 segondra. Ny fizotry ny fametrahana induction dia vita ao anatin'ny fotoana voatondro. Diovina ny be loatra.